Bazobhema bakholwe edilini lomculo | News24
Bazobhema bakholwe edilini lomculo
xxxx ISITHOMBE: SITHUNYELWE
INTAKA ibekelwe amazolo edilini lomculo okuzobe kuboshelwe izingqungqulu zomculo onhlobonhlobo emcimbini ozobe usezinkundleni zemidlalo iGroutville, KwaDukuza ngomhla zingama-27 KuZibandlela(December).
Kuleli dili lomculo kuzobe kuboshelwe abaculi abehlukene okukhona kubo iMafikizolo, Zahara, Mbijana Sibisi noMaqhinga Radebe. Lenqophamlando yedili lomculo ebizwa ngokuthi yi-Awesome Ilembe Music festival izoqala ngomcimbi ozoba sesikhungweni sokugcina amagugu iLuthuli Museum bese kuqhutshekelwa ezinkundleni zemidlalo eGroutville lapho kuzobe kushikisha khona ufudu phakathi kwabaculi abazobe beshiyelana inkundla.
Lo mcimbi uhlelwe wuMnyango wezobuCiko namaSiko nabadidiyeli bakwa-Awesome Africa festival productions. Kulindileke abantu abaqhamuka ezindaweni zaKwaDukuza, Mandeni, Ndwedwe, Maphumulo nezinye ezisondelene nalendawo.
Kulindeleke kubekhona abaculi abangama-20, kusukela kubaculi abasafufusa kuya kwabasebemkantshubomvu endimeni yomculo. Okulindeleke babe khona kuleli dili lomculi ngu-Theo Kgosinkwe ozobe ehambisana noNhlanhla Ncinza, Kwela noMarabi bazobe benandisa kulomcimbi. Kanti akasalanga ngaphandle uDavid Jerkins odume ngelika Qadasi kubathandi bomculo wesiNtu. Uzobe ehambisana nomngani wakhe abacula naye uMaqhinga Hadebe.
Abanye abaculi abasohlwini lwabazonandisa kulelidili lomculo kubalwa iGroutville Hip Hop All Stars, Uhuro Poets Society, Drummers of Burundi, Feast of Famine, Nancy G, Mashabuque, Kwini Kusa, Kalakar, Zamalinda Mbatha, Bonginkosi Buthelezi, Fenyeza, Galaza, Kwenzo Ndlovu, Siyanda Maphumulo, DJ Chief noDJ TPM.
Inhloso yalomcimbi ukuqhakambisa amakhono abaculi abasafufusa nokuhloswe ngawo ukuveza abaculi abasathuthuka emiphakathini. Ungqongqoshe wezobuCiko manaSiko uNksz Bongi Sithole uthe izndawo ezingamagugu ezifana ne King Shaka Heritage, Chief Albert Luthuli’s Museum, Ndondakusuka Hills nentaba iNhlangakazi kwenza babone lomcimbi uba nekusasa eliqhakazile eliya phambili. Uqhube wathi kuyajabulisa kakhulu ukubona isasasa lezobumnandi liya ngokudlondlobala ngenhloso yokuletha ubumnandi emiphakathini. Umcimbi uqala ngehora lesi-9 uze uphele ngo-6:30 ntambama.